September 2021 – Iingcebiso ze-Android cheats
Isibhakabhaka sijikeleza ibhola ye3D – Ukukopa&Ukuqhawula
Uyayithanda imidlalo yebhola. Joyina ulonwabo kwaye uvavanye amandla akho okuqonda i-Sky Rolling Ball 3D! Luhlanga olukhawulezayo olungenakubalwa ngemiqobo engalindelekanga kwaye ixesha liyaphela! Uluhlu, jikelezisa, tsiba, kodwa ungawi uphulukane nobomi bakho! Yinkqubo enzima kwilizwe elingaqondakaliyo, kodwa nefiziksi engalalanisi!Uya kufunda ngokulula… Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: BALL, Ukukopa, Rolling, Isibhakabhaka
Giya lokugqibela – Ukukopa&Ukuqhawula
Giya lokugqibela, umdlalo omtsha weqhinga le-RPG “Mechs & Iintombi”, iyeza kungekudala!Hlaziya i-mechs zakho ngentando yakho, qeqesha iitoni zabaqhubi beenqwelomoya ezintle zemisebenzi eyahlukeneyo kunye namava amadabi amangalisayo!Uhambo olubonisa iiMechs ezinamandla & Abaqhubi beenqwelomoya abahle bayakuqala! Umphathi, masilwe ecaleni! IMIDLALO YOMDLALO:[Lungisa kwakhona ii-mechs zakho ngokukhululekileyo nge -... Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, FINAL, Isixhobo
Ii-Unicorn kwii-Unicycle – Ukukopa&Ukuqhawula
Guqula iimpondo zakho zibe ngamakrele kule midlalo yokulwa yomnyama eqhutywa ngumoya kunye ne-unicorn. Idabi ngokuchasene nezinye ii-unicorn ezimibalabala kumanqanaba amaninzi awodwa ngelixa ulungelelanisa kwibhayisikile yakho ethembekileyo. Lola uphondo lwakho kwaye ulungele igazi, Umboniso wentsomi! Iimpawu zomdlalo:• Ukuzonwabisa ngomdlali omnye ngokudibanisa apho kungekho manqanaba mabini ... Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Unicorns, Unicycles
I-Empire Defender TD: Umdlalo weSicwangciso soKhuselo lweNqaba TD Cheats&Ukuqhawula
Uyinkosi enobuchule kumdlalo weqhinga? Ukuchuma kubuchule bakho bobulumko kwaye ulwe nabachasi abanamandla. Khokela amaqhawe akho anamandla kwaye ukhusele imida yobukumkani bakho ebumnyameni! Ngenisa umdlalo weqhinga kunye nezigidi zabadlali kumlo ongapheliyo kwihlabathi liphela ukuphumelela uloyiso kunye nodumo. Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Defender, Ukhuselo, Ubukhosi, umdlalo, Isicwangciso, Inqaba
Idle Creepy Park Inc. – Ukukopa&Ukuqhawula
Musa ukoyikiswa zizilo 😱! Qala ishishini lakho eloyikekayo! Ngaba unesibindi ngokwaneleyo sokungena kwipaki ye-adventure egcwele izilo ezirhubuluzayo 🤔?Idle Creepy Park Inc. ngamava awoyikisayo kwaye anika umdla kubo bonke abadlali abangasebenziyo🔥! Ukujonga indlu eyoyikisayo enezilo ezikhulu ezoyikisayo ngokuqinisekileyo ayisiyonto inomdla kuye wonke umntu😮. Kuneke u… Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Creepy, Ngasebenzi, Park
Izigebenga zaseMidsomer: Amagama, Ulwaphulo-mthetho & Mystery Cheats&Ukuqhawula
Bamba iglasi yakho yokukhulisa kwaye uncede ukusombulula iimfihlakalo zokubulala kulo mdlalo wephazili omnandi! Midsomer County: indawo ekhangayo apho ama-cottages, iifama, amahlathi kunye nemisinga idala inkohliso yokuzola, ubomi obuzolileyo nobunoxolo. Musa ukukhohliswa nangona kunjalo… I-Midsomer yindawo edumileyo yokuhlala eyingozi, ngokubulala kwindawo yonke... Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Ulwaphulo-mthetho, Midsomer, Murders, Mystery, Amagama
Ugqatso lomdaniso – Ukukopa&Ukuqhawula
Ufuna ukonwabela umculo kodwa indlela endala iyadika kakhulu? Sijoyine kuMdyarho wokuDanisa, umdlalo omangalisayo wokuhamba ngefashoni yomculo! Ngethuba lokuqala unokuyonwabela ukuhamba ngezithende eziphezulu kunye nomculo. Kuphela kuMdyarho wokuDanisa! Qokelela izithende ezininzi eziphakamileyo njengoko unakho kumgaqo weenqwelomoya we-wacky ukuze ube yindawo ephezulu… Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Dancing, Ugqatso
IiGeniuses & Amatye anqabileyo – Umdlalo 3 Ukukopela komdlalo&Ukuqhawula
Amasela ebe amatye anqabileyo eBhotwe kwaye mnye kuphela umntu onegunya lokuwabuyisela.! Uhambo kwihlabathi elingaqondakaliyo kunye noJenni the Genie kunye neqabane lakhe, Trix Fox, ukutyumza amasela athathe ubutyebi beNdlunkulu. Tshintsha, umdlalo, kwaye utyumze amatye anqabileyo, buyisela izinto zakudala, kwaye... Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, umdlalo, Amatye anqabileyo, IiGeniuses, Umdlalo
Umphefumlo Obuhlungu: Ukusinda Okumnyama RPG Cheats&Ukuqhawula
Ngaphezulu 25 izigidi ezikhutshelweyo kwihlabathi liphela! I-Grim Soul yinto yasimahla-yokudlala iphupha elimnyama lokusinda iMMORPG. Iphondo lase-Imperial elakhe laphumelela, ngoku iiPlaguelands zigutyungelwe luloyiko nobumnyama. Abemi bayo bajike baba yimiphefumlo ebhadulayo ngokungenasiphelo. Injongo yakho kukuphila ixesha elide kangangoko unako kulo mhlaba unobungozi. Qokelela izixhobo, ukwakha inqaba, khusela... Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Dark, Grim, RPG, Soul, Ukusinda
Iinduli zentsimbi – Ukukopa&Ukuqhawula
I-Hills of Steel mhlawumbi ngowona mdlalo umluthayo we-physics usekwe kwitanki! Kwaye isimahla! Baleka indlela yakho kwiinduli kwaye uzityumze iintshaba zakho ngentsimbi. Qokelela ukuphanga kwiintshaba zakho eziwileyo kwaye wongeze izithuthi zakho ngophuculo oluhle kunye nezixhobo ezikhethekileyo onokuzifumana.. Vula new customizable tanks and brawl your… Funda ngokugqithisileyo »
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Hills, Steel